बेसार सेवन गर्दा जान्नैपर्ने मुख्य कुरा, धेरै सेवन गरे क्यानसरसमेत हुन सक्ने
विराटनगर, १५ भदौ । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिमार्फत् कोरोना भाइरसको रोकथामको उपाय र शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सरकारी निर्देशिकामा पनि दैनिकरूपमा बेसार प्रयोग गर्न सुझाइएको छ ।
यही कारणले नेपालमा पछिल्लो समय बेसारको आयात निकै बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । भान्सामा दैनिकरूपमा प्रयोग हुने बेसारमा औषधीय गुण भए पनि यसको अत्यधिक सेवनले शरीरलाई लाभभन्दा हानी बढी हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत औषधि चिकित्सा विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक डा. सम्मोद आचार्य बेसारको मनपरी प्रयोग निकै घातक हुनसक्ने बताउँछन् ।
रुघाखोकी लागेका बेला एक–दुई दिन बेसारपानी पिउँदा समस्या हुँदैन तर, आफ्नो शरीरको तौलअनुसार कति बेसार खानु हुन्छ भन्ने विषय थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ । बेसारको धेरै प्रयोगका साथै बजारमा पाइने मिसावटयुक्त बेसारले क्यान्सरसहित अन्य जटिल रोगको खतरा रहने त्रिविको जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक गंगाप्रसाद खरेल बताउँछन् ।
मानव शरीरमा बेसारको महत्वबारे धेरै अनुसन्धान भएको र यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ । तर, बेसारको अत्यधिक प्रयोगले दीर्घकालीनरूपमा समस्या उत्पन्न गराउँछ । अत्यधिक बेसारको सेवनले मिर्गौलामा समस्या भएकाहरूलाई खतरामा पार्ने, कलेजोमा समस्या पार्ने तथा एलर्जीदेखि क्यान्सरसम्मको जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ ।
रगत जम्न नदिने औषधि सेवन गर्नेहरूले धेरै बेसार खाँदा रक्तस्राव हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि औषधि खाइरहेका व्यक्तिले चिकित्सकको सल्लाहबिना थप बेसार खान नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार नेपाली बजारमा उपलब्ध बेसारमा पहेँलो रङ ल्याउनका लागि ‘लेड क्रोमेट’, चक, मैदालगायतका वस्तु र स्टार्च मिसाइएको पाइने गरेको छ ।
खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञ डा. हुमा बखिमका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसले आफ्नो तौलअनुसार प्रतिदिन चारदेखि आठ ग्रामसम्म बेसार सेवन गर्न उचित हुने बताइएको छ । बेसारले शरीरमा ताप पैदा गर्ने हुँदा यसलाई गर्मी मौसममा कम खान उचित हुन्छ ।